रोनाल्डोविरुद्ध कामदार नै आन्दोलित ! – Everest Dainik – News from Nepal
रोनाल्डोविरुद्ध कामदार नै आन्दोलित !
असार २९ । चर्चित फुटबलर क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई धेरै रकम तिरेर अनुबन्ध गरेको भन्दै इटालीमा विरोध भएको छ । युभेन्टसले रोनाल्डोलाई धेरै रकम तिरेर अनुबन्ध गरेको विरोधमा इटालीमा फिएत क्राइस्लरका कामदार आन्दोलित भएका हन् । कार निर्माता कम्पनी फिएत क्राइसलर र युभेन्टसको प्रमुख लगानीकर्ता एउटै हुन् ।
दुवैमा एग्नेली परिवारको नियन्त्रण रहेको छ । फिएतको प्लान्टमा कार्यरत कामदारले एउटै खेलाडी किन्नका लागि युभेन्टसले धेरै रकम खर्चिएको र आफूहरुले भने ठूलो मात्रामा वित्तिय त्याग गर्न बाध्य रहेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
युभेन्टसले रियल मड्रिडका रोनाल्डोलाई ११२ मिलियन युरो तिरेर क्लब भित्र्याएको हो । रोनाल्डोले युभेन्टससँग चार वर्षको सम्झौता गरेका छन् । रोनाल्डो माथि गरिएको ठूलो खर्चको अर्थ फिएतले लगानी गुमाउने रहेको भन्दै कामदारहरुको संगठन युएसबीले विरोध जनाएको हो ।
कम्पनीले हजारौँ कामदारको भविष्य अन्यौलमा पारेको भन्दै भविष्याको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग आन्दोलित कामदारले गरेका छन् । एक खेलाडीलाई धनी बनाएर हजारौँ कामदारको भविष्य अन्धकारमा पार्न नहुने उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।
३३ वर्षका रोनाल्डोका लागि युभेन्टसले धेरै रकमको तिरेको हो कि भनेर चासो त भएको छ तर उनको खेल लयका कारण युभेन्टस क्लब कीर्तिमानी रकम तिर्न राजी भएको हो । तर फुटबल क्षैत्रको वित्तिय गतिविधिका विश्लेषकहरुले भने युभेन्टसले रोनाल्डोका लागि खर्च गरेको रकम र उनको पारिश्रमिकका लागि चाहिने भन्दा धेरै रकम उनको उपस्थितिका कारण आम्दानी गर्न सक्ने बताएका छन् ।
रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गरेसँगै युभेन्टसको सेयर भाउ बढेको छ भने रोनाल्डोको जर्सीको बिक्री पनि बढेको छ । यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा युभेन्टसका फलोअर्स पनि ह्वात्तै बढेका छन् । -एजेन्सी
ट्याग्स: Crishtiano Ronaldo, क्रिष्टियानो रोनाल्डो